Fiantohana an-dranomasina sy lozam-pifamoivoizana any Emirà Arabo Mitambatra | Orinasa Mpampanoa lalàna
Fiantohana ranomasina sy lozam-pifamoivoizana ao Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Emirà Arabo Mitambatra
Ny fiantohana rehetra dia natao hijerena ny loza raha misy tranga mahatsiravina toy ny fahavoazana amin'ny fananana sy ny fepetra, ny loza na ny fahafatesana. Mikasika ny Ships, ny tsatokazo avo kokoa noho ny singa rehetra izay manao hetsika. Ohatra, ny loza ateraky ny fatiantoka ahazoana tombom-barotra mahasoa na lavitra, dia ny loza manimba ny tany noho ny fandotoana solika sy ny loza ateraky ny fisian'ny ranomasina manan-karena noho ny lozam-pifamoivoizana.
Ny fiantohana ny loza rehetra dia azo tantananaina raha tsy misy ny fiantohana ara-bola rehefa takiana ny tena, indrindra ny fiantrana Maritim dia ilaina amin'ny sambo sy ny tompon'ny sambo. Alefaso fotsiny fa, ny fiantohana dia azo tanterahana amin'ny sambo. Ny karazana fiantohana an-dranomasina azo idirana ny tombotsoan'ny mpanjifa dia maro ary samy azo tanterahina amin'ny fomba manokana azy ireo.
Mba hahafantarana azy any amin'ny seranan-tsambo lehibe UAE, ny sambo iray dia tsy maintsy manana vatam-paty sy fitaovana ary antoka sy fiarovana. Ny haavon'ny sehatra dia tsy baikoina ary tompon'andraikitra amin'ny sain'ny seranan-tsambo.
Misy fiantohana vitsivitsy sy karazana lozam-pifamoivoizana miaro karazana amin'ny tompon'ny fandefasana, tompona entana sy saribao.
Zon'ny mpandika lalàna
Ny subrogation dia tombon-tsoa ho an'ny fiantohana rehefa nanonitra izany antoka izany, hijanona amin'ny kirarony azo antoka ary hitaky ny antoko fahatelo azo antoka. Ny zon'ny fiantohana iray ahazoana valiny amin'ny planina miverina dia tsy mamono ny zon'ny fiantohana omena avy amin'ny antoko fahatelo momba ny fatiantoka.
Amin'ny alàlan'ny fanandramana, ny fanarenana rehetra natao dia tombony ho an'ny mpanome tolotra fiarovana, na izany aza dia miakatra amin'ny ambaratongam-bola omena. Ny tombontsoan'ny mpiantoka antoka iray araka ny lalàna UAE dia napetraka ao amin'ny andininy 1030 an'ny CC.
Fehiny eo amin'ny ankavanan'ny Subrogation
Ny mpiantoka dia tsy afaka mamerina mihoatra ny refin'ny fandoavana ny vola aloa. Raha toa ka misambotra bebe kokoa ny mpamatsy fiarovana dia tsy maintsy aloa aminy ny antoka.
Ny zon'ny mpiantoka dia tsy lehibe kokoa noho ny an'ny antoka. Ohatra, raha ny fifanarahana antoka amin'ny antoko fahatelo azo ianteherana amin'ny adidin'ny ankolafy fahatelo dia mihatra amin'ny mpamatsy vola fiarovana izany fetra izany.
Araka ny andininy 1030 amin'ny fehezan-dalàna sivily, ny drafitra famerenam-bidy dia tsy afaka mitondra fanamafisana miady amin'ny olona ambony na taranaky ny antoka, na olona iray izay manana antoka azo antoka.
Ny fomba fanamboarana ny andininy faha-1030 dia ny kaonty rehetra voarindra amin'ny olona iray azo antoka fa tsy singa amin'ny orinasa.
Loza Marina fa ny fifandonana sy fandotoana tany UAE
Ny famoriam-bola dia voafehin'ny andininy 318 ka hatramin'ny 326 amin'ny lalàna Ara-barotra. Ireo tenety dia toa ny an'ny Collision Convention 1910.
Ny Emira Arabo Mitambatra dia nanaiky koa ny fanekena iraisam-pirenena momba ny fisorohana ny fifandonana amin'ny ranomasina 1972.
Fahavoazana voajanahary hafa ateraky ny sambo
Ny fepetra an-dranomasina dia voarakitry ny lalàna federaly miaro ny tontolo iainana (24/1999).
Ny fangalarana rehetra miditra amin'ireo faritra an-dranomasina any UAE dia tsy maintsy manana taratasy ara-dalàna iraisam-pirenena momba ny fandotoana solika ara-tsolika ary tokony hitohy hatrany ny fanambarana hamaritana ny daty sy ny faritra nanaovana ny muck.
Na iza na iza manimba ny fiainana an-dranomasina tsy am-piheverana na an-tsitrapo noho ny fatiantoka ny lalàna 24/1999, dia miandraikitra ny fandaniana amin'ny fitsaboana na fanesorana ny fahavoazana sy ny vokatra azo avy eo.
Ny fandikana ny lalàna 24/1999 dia mety hampandoavina onitra hatramin'ny Dh500, 000 ary hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina.
Ny Emirà Arabo Mitambatra dia mivory miaraka amin'i Annexes I ka V amin'ny Fifanarahana Iraisam-pirenena ho an'ny fisorohana ny fandotoana ny sambo.
Ny UAE dia namepetra ny Fifanarahana Iraisam-pirenena momba ny Salvage 1989 isaky ny 1993. Ny famonjana dia fehezin'ny Fanondroana 327 339 amin'ny lalàna Ara-barotra.
Araka ny andininy faha-8 amin'ny lalàna ara-barotra, dia nandresy ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny Salvage 1989 izay nifandonan'ny fitondrana roa tonta.
Ny tombon-tsoa amin'ny fanonerana ho an'ny famonjena mahomby dia tsy miankina amin'ny fanamafisana ara-dalàna.
Tsy misy tambin-karama ho an'ny sarety mahazatra na mpanamory fiaramanidina na tsy andoavambola.
Ankoatr'izay, tsy misy tombontsoa ho an'ny onitra raha toa ka nandà fanampiana noho ny saina tsara ilay sambo voaaro.
Ny refin'ny fanonerana dia fehezin'ny fitsarana mahay, raha tsy ampitain'ny antoko.
Inona no fenitra sy paikady azo ampiharina amin'ny famongorana ny sanda ao amin'ny faritaninao?
Ny UAE dia tsy antoko ao amin'ny Nairobi Wreck Removal Convention 2007 ary ny famoahana ny sambo-fiara dia tsy tantanan'ny lalàna UAE mazava.
Amin'ny toe-javatra inona no ahafahan'ny manam-pahaizana mandidy ny fandroahana azy?
Tsy misy ny torolalana napetraka ho an'ny fandroahana ny famoronana, fa ny manam-pahaizana manokana dia mety homena hery matanjaka handoavana ny famongorana ny famoronana.
Fiantohana fitaterana an-dranomasina sy lozam-pifamoivoizana dia handrakotra ny fahavoazana na manimba ny vokatrao raha mandehandeha amin'ny seranam-piaramanidina, lalana ary an-dranomasina ianao. Ny sampan-draharahan'ny fiantohana dia afaka manome ny fandaharana ho an'ny marika fitaterana an-dranomasina mba handrindrana ny orinasanao manokana. Azon'izy ireo atao ihany koa ny mamehy ny entana isan-taona amin'ny fiarovana Transit izay mety ho an'ny olona izay manana ny fivoarana ankapobeny sy tsy misy fepetra ao UAE.
Misy karazany isehoan'ny fiparitahana mba hijerena ny hevitry ny enta-mavesatra. Farany, tsy mitovy amin'ny fiparitahan'ny fenitra mankany amin'ny famafazana mahazatra mba hifanaraka amin'ny ilain'ny mpanjifanay samihafa.
Eritreritra 1 momba ny “Fiantohana an-dranomasina sy lozam-pifamoivoizana ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra”
05/07/2019 amin'ny 6:31 maraina
Ny fitaterana ny kaonty ho an'ny ankamaroan'ny lozam-pifamoivoizana sy ny fahatratrarana matetika dia vokatry ny fianjeran-drano anaty sambo hafa (mihazakazaka) na zavatra iray. Ny fifandonana toy izany dia mety hifandraisany amin'ny sambo fialamboly toy ny sambo sy ny yach na ny sambo ara-barotra toy ny sambo filokana sy sambo entana.